सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा डाक्टरको पूर्जि विनै औषधी वेच्ने प्रहरीको छानविनमा - Sarangkot NewsSarangkot News
सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा डाक्टरको पूर्जि विनै औषधी वेच्ने प्रहरीको छानविनमा
12 March, 2020 10:15 am
डाक्टरको पूर्जि विनै औषधी विक्री गर्ने पोखरा १३ मियाँपाटन स्थित कुँडहर मेडिकल हलका संचालक सन्तोष वि.क.लाई फागुन २७ गते सोमबार कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छानविन अगाडि वढाएको छ । सन्तोषले टापल–५० नामको दवाइ डाक्टरको पूर्जि विनै ग्राहकलाई विक्री गरेको आरोप लागेको छ । उक्त दवाई प्रसुती पिडा जस्तो वढि दुखाई हुँदा प्रयोग गर्न दिइन्छ, दुई भन्दा वढि ट्याव्लेट सेवन गर्दा लठ्ठ बनाउने हुँदा नसाको लागि टापल–५० प्रयोग हुन सक्ने एक चिकित्सकले वताए ।
ट्रामाडोल मोलिक्यूल अंकित दवाई नार्कोनन रुपमा प्रयोग हुन थालेपछि सरकारले केहि समय अघि प्रतिवन्ध लगाएको स्रोतले वतायो । ट्रामाडोलको प्रतिवन्ध पछि ट्रामाडोल मोलिक्यूलको टापेल-५० आएको र उक्त दवाई कडा खालको पेनकिलर भएकोले डाक्टरको पूर्जि विना वेचविखन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने एक औषधी व्यवसायीले सराङकोटलाई वताए ।
यस प्रकरणमा रामबजार प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएका सन्तोष विकलाई मंगलबार हाजिरी जमानीमा छोडिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता प्र.ना.उ. राजकुमार केसीले वताए । वरामद औषधी कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने वारे औषधी व्यवस्था विभाग काठमाडौंमा लिखित जानकारी मागिएको प्रनाउ केसीले वताए । विभागले जवाफ दिएपछि कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने एकिन हुने वताए ।
सरकारी कर्मचारीको नाममा दर्ता रहेको कुँडहर मेडिकल हलमा एच.ए. पढेका सन्तोषले व्यापार गर्दै आएका थिए । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत रमेश चन्द्र गैह्रेको नाममा दर्ता रहेको फार्मेसी गैह्र फर्मासिष्टलाई संचालन गर्न दिएको खुल्न आएको छ । एउटाको फर्ममा अर्कोको धन्दा चलाउने प्रवृत्ति रोक्न राज्यका निकायले निगरानी र कारवाहीलाई तिव्रता दिनुपर्ने सर्वत्र आवाज उठ्दै आएको छ ।